Gợi ý 12 cách làm hồng vùng kín tại nhà an toàn, hiệu quả nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Gợi ý 12 cách làm hồng vùng kín tại nhà an toàn, hiệu quả nhất | Muasalebang in Muasalebang
Osisi abaningi abafunayo indlela yokwenza isitho sangasese sowesifazane sibe pink ngoba ngizizwa ngingavikelekile phambi komphikisi. Abantu abaningi bakhetha ukuya kuma-spas wezimonyo ukuze bathuthuke, kodwa futhi abesifazane abaningi bakhetha ukwenza izingxenye zangasese ezibomvana ekhaya ukuze bonge izindleko. Ingabe kuphephile ukwenza kanjalo? Iyiphi indlela ephumelela kakhulu namanje engathinti impilo yakho? Sicela ubhekisele esihlokweni esingezansi ukuze ube nokukhetha okungcono kakhulu!
1 Isizathu sokuthi “intombazane” ilimele
2 Ingabe kufanele ngenze isitho sangasese sowesifazane sibe pink ekhaya?
3 Imiyalo yezindlela eziyi-12 zokwenza indawo yangasese ibe pink ekhaya
3.1 1. Sebenzisa ukhilimu ukwenza indawo eseduze ibe pink
3.2 2. Ungamenza kanjani abe mnandi ngeyogathi
3.3 3. Indlela yokwenza i-vaginal pink ekhaya ngelamula noju
3.4 4. Pinky indawo eseduze ngokushesha ngepapaya evuthiwe
3.5 5. Sebenzisa utamatisi ukwenza isitho sangasese sowesifazane sibe pink
3.6 6. Sebenzisa ingxube yobisi olusha, amafutha kakhukhunathi nobhanana ovuthiwe
3.7 7. Yenza isitho sangasese sowesifazane sibe pink ngenhlaba
3.8 8. Sebenzisa i-turmeric nobisi olusha
3.9 9. Indlela yokwenza i-vaginal pink ngempushana ye-rice bran
3.10 10. Sebenzisa amazambane ukwelapha imibuthano emnyama ekhaya
3.11 11. Sebenzisa amafutha kakhukhunathi amsulwa
3.12 12. Indlela yokwenza indawo eseduze ibe pink ngamahlamvu e-betel
4 Qaphela lapho unakekela indawo yangasese ekhaya
Isizathu sokuthi “intombazane” ilimele
Udinga ukwazi izimbangela kanye nezici ezenza “intombazane encane” ilinyazwe ukuze ivimbele ngempumelelo futhi ithole ukwelashwa okufika ngesikhathi kanye nezinyathelo zokulungisa. Kuye ngendawo yowesifazane ngamunye, indawo yangasese Kungaba pink okhanyayo, opinki ogqamile, onsomi-pinki noma onsomi obumnyama.
Kodwa-ke, indawo yangasese yabanye besifazane imnyama, ivulekile, ishwabene. Lokhu kwenza abesifazane bakhathazeke, kuthinte impilo yabo yomshado, futhi kwenza abantu abaningi bazizwe bengazethembi. Ngakho yini imbangela yalesi simo? Kunezizathu eziningi, kodwa ngokuvamile zibangelwa:
Indawo yangasese izalwa ibe mnyama, inwetshiwe ngenxa yombala wesikhumba noma ufuzo. Leli zinga futhi liphezulu kakhulu futhi liwukukhathazeka abaningi okufanele bakhathazeke ngakho.
Ngesikhathi sokukhulelwa, ukuguqulwa kwamazinga e-hormone ngaphambi nangemva kokukhulelwa nakho kunethonya elithile kumbala wendawo yangasese, kungenza “intombazane” ingabi eyomile njengangaphambili.
Abesifazane abanocansi oluningi, ngokweqile noma abesifazane abakwi-perimenopause basengozini enkulu kakhulu yokubhekana nesimo lapho indawo yangasese iba mnyama, ibe mnyama, imihuzuko, imibimbi, nokunwebeka kancane.
Ngaphezu kwalezi zici ezingenhla, indawo yangasese ayisekho rosy, kungase kube ngenxa yokuhlala kakhulu, ukugqoka izingubo zangaphansi ezimpintsha kakhulu… lokhu kuzokwenza ukugeleza kwegazi kube kubi, ngaleyo ndlela kwakhiwe izingulube ezimnyama ezenza indawo yangasese ibe mnyama kunezinye izindawo zesikhumba emzimbeni.
Xem Thêm Cách làm sữa yến mạch thơm ngon bổ dưỡng cho bé và cả gia đình | Muasalebang
Umbala wentombazane yakho encane umnyama, umbala ompofu, ubumnyama buzothinta kakhulu ubuhlobo nomyeni wakhe, ikakhulukazi abayeni abasheshayo, ubulili obuphezulu. Ngakho-ke, abesifazane abaningi baye beza nezinyathelo zokumenza pink ekhaya ngethemba lokuthuthukisa isimo sabo ngokushesha ngangokunokwenzeka ngaphandle kokuchitha imali eningi. Ingabe lesi sixazululo kufanele sisetshenziswe? Ingabe ukwenza “intombazane” ebomvana ekhaya kuthinta impilo? Bheka ingxenye elandelayo!
Ingabe kufanele ngenze isitho sangasese sowesifazane sibe pink ekhaya?
Ukuze uphendule lo mbuzo, kubalulekile ukucabangela izici eziningi ezizimele ezivela kumuntu ngamunye. Uma unesikhathi nemali eyanele, ukuya kuma-spas, ama-salon ubuhle noma izibhedlela ezikhethekile ukusebenzisa izindlela zesimanje kuzoba kuhle futhi kunikeze imiphumela esheshayo.
Kodwa-ke, uma izimo zingakuvumeli, ungasebenzisa izindlela zokwenza indawo yakho yangasese ibe pink ekhaya ukuze uxazulule ukukhathazeka kwakho, okuyinto enhle kakhulu ukuyenza.
Ngokusebenzisa izithako zemvelo noma ukuthenga okhilimu ukwelapha imibuthano emnyama, kuyoba engabizi kakhulu. Ikakhulukazi, uzosindisa isikhathi sokuhamba futhi ungesabi ukuya ezindaweni eziminyene ukuze uxazulule le nkinga.
Ngaphandle kwalokho, isikhumba sakho asinaso ukuhlasela noma umthelela ophumela ngaphandle obangela ubuhlungu noma izibazi lapho welashwa ekhaya.
Kodwa-ke, ngezithako zemvelo noma ama-creams okwelapha ekhaya, udinga ukufunda ngokucophelela ukugwema ukubangela ukungezwani komzimba nokuzwela kunoma yiziphi izithako ezisebenzayo. Ikakhulukazi, udinga ukuqinisekisa ukuthi “intombazane” yakho inempilo ngokuphelele futhi ayinayo izinkinga zokuvuvukala.
Imiyalo yezindlela eziyi-12 zokwenza indawo yangasese ibe pink ekhaya
1. Sebenzisa ukhilimu ukwenza indawo eseduze ibe pink
Ukusebenzisa okhilimu ukwenza indawo esondelene ibe pink ekhaya kungenye yezixazululo ezingcono kakhulu zabesifazane. Ngenxa yokuthi umkhiqizo ngamunye uyinhlanganisela yezithako ezisebenzayo ngokugxila okuchaziwe, uvumela ukwelashwa okuphumelelayo kakhulu kokumnyama kwendawo eseduze. Ngeke ube nezinkinga zokucasuka ngenxa yokusebenzisa ngokweqile.
Ngokuhambisana nalokho, kukhilimu ukwenza indawo esondelene ibe pink, izofaka izakhi eziningi ezisiza ukwenza isikhumba sibe pink futhi kusize ukuthuthukisa isimo sesikhumba kangcono. Imvamisa, inemiphumela yokulwa nokuguga, iqinisa, ithuthukise ukujikeleza kwegazi, inciphisa imibimbi, iletha iphunga elimnandi…
Inzuzo enkulu yokusebenzisa le mikhiqizo ekhethekile ukuthi awuchithi isikhathi esiningi kakhulu isikhathi ngasinye uyisebenzisa. Ngemuva kokuhlanza ngakunye, udinga nje ukufaka isicelo futhi uvumele ukhilimu ukuba ubambe ngokwemvelo ngaphandle kokugeza.
Emakethe namuhla, kunemikhiqizo eminingi yokwelapha amabala amnyama, yenza isitho sangasese sowesifazane sibe pink kusuka kumikhiqizo eminingi ehlukene. Ungabhekisela kweminye imikhiqizo evelele njengePiora, Nuwhite, Neipink, XXVirgin, Nipple Pink…
2. Ungamenza kanjani abe mnandi ngeyogathi
Iyogathi yaziwa njengokudla okusebenzayo ukwenza ipinki ekhaya. Isithako esitholakala kalula futhi esilungele kakhulu kokubili uhlelo lokugaya ukudla kanye nesikhumba. Akusizi nje kuphela ukwelapha amabala amnyama kodwa futhi kupholisa ukucasuka kwesikhumba kahle kakhulu.
Udinga ukulungisa ingxube ye-yogurt engenashukela. Bese uhlanza indawo yangasese bese uthatha inani elincane le-yogurt bese ulisebenzisa ngqo endaweni yangasese. Kufanele uhlanganise ne-massage emnene imizuzu emi-5 bese uyiyeka cishe imizuzu eyi-15. Ekugcineni, hlanza futhi ingane, womise futhi uqedile.
Ngale ndlela, kufanele ukwenze njalo izikhathi ezingu-2-3 ngesonto ukuze uthole imiphumela esheshayo.
3. Indlela yokwenza i-vaginal pink ekhaya ngelamula noju
Uju luqukethe ama-amino acid amaningi kanye nemisoco esiza isikhumba esibushelelezi, sinciphise amabala amnyama futhi sithambe. Nakuba ulamula unokuqukethwe okuphezulu kwe-vitamin C, usiza ukulwa nokuguga futhi wenze isikhumba sibe mhlophe ngempumelelo kakhulu. Inhlanganisela yalezi zinhlanganisela ezimbili ikunikeza iresiphi ephelele yokwelapha imibuthano emnyama ekhaya ngaphandle kokuchitha imali eshisiwe.
Uxuba uju nejusi kalamula ngesilinganiso se-3: 1 ukuze uthole unamathisele. Le ndlela ingasetshenziswa kuzo zombili izingono, igroin, amakhwapha, ukuze ukwazi ukuxuba kancane ukusebenzisa qinisekisa ukuthi isilinganiso silungile.
Ngemva kokuhlanza indawo eseduze, sebenzisa ingxube kule ndawo ebucayi. Massage imizuzu embalwa bese ugeza ngamanzi afudumele. Udinga ukuphikelela ukukwenza izikhathi ezi-2 ngesonto ukuze ubone ushintsho olubalulekile “entombazaneni yakho encane”.
4. Pinky indawo eseduze ngokushesha ngepapaya evuthiwe
I-papaya evuthiwe iqukethe inani elikhulu lamavithamini namaminerali. Ikakhulukazi, amavithamini A no-C anokusetshenziswa okuhle kakhulu ekondleni isikhumba semvelo esipinki nesimhlophe.
Usebenzisa ucezu lwepapaya evuthiwe ehlutshiwe futhi ehlanzekile, bese isetshenziswa ngokuqondile endaweni eseduze ehlanziwe. Bese ulinda ukuthi umsoco ungene cishe imizuzu engama-20 bese ugeza ngamanzi. Lokhu kufanele ukwenze izikhathi ezi-3 ngesonto.
5. Sebenzisa utamatisi ukwenza isitho sangasese sowesifazane sibe pink
Ukusebenzisa utamatisi ovuthiwe kubuye kuyindlela yokuba pink ngokwemvelo futhi iphunga elimnandi ekhaya. Ngenxa yokuthi utamatisi unamaVithamini C no-E amaningi, asiza ukuthuthukisa umbala wesikhumba kahle kakhulu, asuse amaseli e-stratum corneum futhi enze isikhumba sithambe ngokuphawulekayo.
Sebenzisa u-1-2 utamatisi ovuthiwe, susa imbewu nezikhumba, bese u-puree. Hlanganisa noju oluncane bese ulisebenzisa endaweni eseduze futhi uyigcine cishe imizuzu engu-15. Ekugcineni hlambulula ngamanzi afudumele bese womisa.
6. Sebenzisa ingxube yobisi olusha, amafutha kakhukhunathi nobhanana ovuthiwe
Lezi zonke izinto zangempela osuvele unazo ekhishini lakho ngakho ukuqaliswa kulula kakhulu. Kodwa-ke, le ngxube isiza “intombazane” yakho ukuthi ibe yinhle futhi ikhanye ngendlela ephumelela kakhulu.
Uzodinga ukulungisa ubisi olusha olungenashukela oluxutshwe namafutha kakhukhunathi kanye ne-1/2 ye-banana puree. Ngemuva kokugeza nokuhlanza indawo eseduze, sebenzisa ingxube elungiselelwe esikhumbeni bese ulinda cishe imizuzu eyi-10 ukuze izakhi zisebenze. Ungamasaja ngobumnene kodwa ungahlikihli ngamandla. Ekugcineni, uyawuhlanza ngamanzi afudumele. Kwenze njalo izikhathi ezingama-2-3 ngesonto.
7. Yenza isitho sangasese sowesifazane sibe pink ngenhlaba
Indlela yokuphinki indawo esondelene ngejeli yenhlaba, eyaziwa nangokuthi inhlaba, yenziwe abantu abaningi futhi badlulisela komunye nomunye mayelana nempumelelo ekulethayo. Ngoba ijeli ye-aloe vera iqukethe izithako ezisebenzayo ezisetshenziselwa ukwenza isikhumba sibe mhlophe, i-antibacterial, i-deodorant, ne-moisturizing.
Udinga nje ukuthatha i-aloe vera entsha ehlutshiwe futhi ihlanzekile ukuze uyisebenzise kalula. Sicela uhlanze indawo yangasese bese usebenzisa ijeli ngqo kule ndawo yesikhumba, ulinde cishe imizuzu eyi-10 bese ugeza ngamanzi afudumele.
8. Sebenzisa i-turmeric nobisi olusha
I-Turmeric ibhekwa njengomuthi okhethekile wokusiza ukuphatha amabala amnyama kanye nesikhumba esimhlophe ngokuphumelelayo, kuhlanganiswe nobisi olusha kuyoba nomthelela omuhle kakhulu esikhumbeni esibucayi “sentombazane encane”. Ngakho-ke, lena enye yezindlela eziphumelela kakhulu abesifazane abazisebenzisayo ukuphatha amakhwapha amnyama ekhaya.
Hlanganisa izipuni ezi-2 ze-turmeric powder no-50ml wobisi olusha olungenaswidi ukuze wenze inhlama. Okulandelayo, hlanza indawo eseduze, bese usebenzisa ingxube bese ubhucunga ngobumnene. Ngemva kwemizuzu engaba ngu-15, yigeze ngamanzi afudumele.
9. Indlela yokwenza i-vaginal pink ngempushana ye-rice bran
Impuphu ye-rice bran inokuqukethwe okuphezulu kwe-Vitamin B3 (niacin) enomphumela omhlophe wemvelo. Ngakho-ke, lena enye yezindlela eziye zasetshenziswa isikhathi eside ukuze zipinki izindawo eziyimfihlo zabesifazane.
Sebenzisa isipuni esingu-1 se-rice bran exutshwe nobisi olusha ngaphandle koshukela ube yingxube bese ufaka endaweni yangasese. Ungakwazi ukubhucunga ukuze ususe amangqamuzana esikhumba e-keratinized futhi usize ukujikeleza kwegazi kangcono. Bese, yihlanza ngamanzi. Yenza njalo kabili ngesonto, uzoba nemiphumela engalindelekile.
10. Sebenzisa amazambane ukwelapha imibuthano emnyama ekhaya
Ubuwazi ukuthi amazambane nawo ayasebenza kakhulu ekwelapheni imibuthano emnyama ekhaya? Uzomangala ukuthi uyisebenzisa kanjani le ndlela njalo ngesonto.
Ukubilisa amazambane aze athambe bese uwagaya esashisa kulula ukwenza. Bese, engeza 2 amathisipuni kalamula uhlanganise kahle. Okulandelayo, thatha ingxube ukuze uyisebenzise endaweni yangasese futhi uhlikihle ngobumnene imizuzu engaba ngu-15 bese ugeza ngamanzi.
11. Sebenzisa amafutha kakhukhunathi amsulwa
Akukhona nje ukwenza “intombazane” yamafutha kakhukhunathi abe pink, kodwa futhi kuletha iphunga elimnandi kakhulu neliyengayo endaweni yakho yangasese.
Usebenzisa amafutha kakhukhunathi ahlanzekile ukuze ugcobe ngqo esikhumbeni sendawo eseduze, bese ubhucunga cishe imizuzu eyi-10. Ekugcineni, sebenzisa amanzi afudumele ukuze ugeze futhi womise.
12. Indlela yokwenza indawo eseduze ibe pink ngamahlamvu e-betel
Iqabunga le-betel lisebenza kahle kakhulu ekunqandeni ukuvuvukala, libe mhlophe futhi liqinise indawo yangasese. Ngale ndlela, uzodinga ukuhlanganisa umusi ukuze uthole umphumela omuhle kakhulu.
Bilisa amaqabunga e-betel ngamanzi, engeza usawoti omncane kanye nejusi kalamula ukuze uphole cishe ngama-degree angu-50, bese uwafaka ebhodweni futhi wenze ukufutheka. Ngemva kokuba amanzi esepholile, sebenzisa amanzi ukugeza indawo eseduze.
Qaphela lapho unakekela indawo yangasese ekhaya
Ngaphandle kwezindlela zokupinki indawo yangasese ekhaya okukhulunywe ngenhla, udinga ukuhlanganisa ukunakekelwa kwendawo yangasese ngokucophelela namanothi alandelayo:
Hlanza indawo eseduze ngesixazululo sokuhlanza nsuku zonke. Kufanele ukhethe imikhiqizo enezithako zemvelo ezingabangeli ukucasuka.
Phuza amanzi amaningi futhi udle ukudla okulinganiselayo okucebile izithelo nemifino.
Nquma izinwele ze-pubic kahle ukuze ugweme izifo.
Akufanele udouce ngaphandle uma uqondiswa udokotela wakho.
Ungagqoki izingubo zangaphansi ezimpintshayo.
Ungakudli ukudla okunuka kabi.
Ngenhla kunezindlela eziyi-12 ezilula nezisebenza kahle kakhulu zokwenza indawo esondelene ibe pink ekhaya. Ngethemba, amasheya kulesi sihloko azokusiza ekuthuthukiseni isimo esimnyama “sentombazane encane”.
Top 8 bảng mắt ColourPop được yêu thích nhất hiện nay | Muasalebang